विद्यार्थीले शिक्षकलाई सोधेको यो रमाइलो प्रश्न ! - Everest Dainik - News from Nepal
विद्यार्थीले शिक्षकलाई सोधेको यो रमाइलो प्रश्न !
शिक्षकः तिमीहरुको परिक्षा नजिक आइसक्यो, अब कसैको मनमा कुनै प्रश्न छ भने सोधे हुन्छ ।
माधव नेपालको छोराः उठ्यो र भन्यो, सर तपाईंहरु प्रश्नपत्र कहाँ छाप्दै हुनुहुन्छ ?
याे पनि पढ्नुस गफाडी बच्चाहरुको यो रमाइलो चुट्किला